Zvikamu zvechirimwa: tsananguro uye maitiro | Green Renewables
Vanhu vazhinji vanogona kuziva chikuru Zvikamu zvechirimwa sezvo pane maerekitironi ane polar muti chero chirimwa. Nekudaro, zvinogoneka kuti kwete imwe neimwe nhengo dzese dzechirimwa mune kongiri uye zvakadzama.
Naizvozvo, tichakumikidza chinyorwa ichi kuti tikuudze kuti ndezvipi zvikamu zvikuru zvechirimwa zvakadzama uye ndeapi mabasa echimwe nechimwe chazvo.
1 Zvikamu zvemuti
Kana tikapfupikisa kuti ndedzipi zvikamu zvikuru zvechirimwa, tinogona kutaura kuti ndeaya anotevera:
Izvi zvinowanzo siyanisa anenge munhu wese. Zvisinei, hunhu hwechikamu chimwe nechimwe chechirimwa hahuzivikanwi zvakanyanya mukudonongodza kwakadaro nenzira yakajairika. Tichanyora chimwe nechimwe kuti ndezvipi zvikamu zvechirimwa.
Dzinde ichikamu chemuchadenga chechirimwa, uye rimwe remabasa acho nderekuchipa rutsigiro nechimiro, chichitsigira dzimwe nhengo dzechirimwa dziri pamusoro pevhu, semashizha nemaruva. Chimwe chayo chikuru chimiro ndechekuti inoratidza negative geotropism, zvinoreva kuti inokura ichienda kune rimwe divi regiravhiti. Kunyangwe isu takataura kuti chikamu chemuchadenga chechirimwa, chokwadi ndechekuti kune akati wandei marudzi emazita uye mabasa awo:
Madzinde anogona kukamurwa nenzira dzakasiyana, asi anowanzo kupatsanurwa zvichienderana nenharaunda yaanowanikwa, nekudaro kusiyanisa pakati pepasi nemhepo madzinde.
Dzinde dzepasi pevhu dzakakamurwa kuita tubers, rhizomes uye mababu.
Aerial madzinde Inogona kupatsanurwa kuita dzinde dzakasimba, stolons, kukwira madzinde uye dzakamonyoroka madzinde, asi kunewo akakosha madzinde akadai seprickly, stoloniferous kana tendril.
Sezvatakataura, rimwe remabasa maviri makuru edzinde kutsigira chikamu chemhepo chechirimwa. Imwe yacho kutakurwa kwezvinovaka muviri uye zvinhu kuburikidza nemukati mechirimwa. Kubva pamidzi, iyo inonzi sap yakasvibirira inokwira pa stem tube kusvika kumashizha, iyo inowedzerwa ne carbon dioxide uye inobudisa muto wakanaka, chiri chikafu chechirimwa.
Midzi inoonekwa nyore pamiti yakawanda. Se inobata nechikamu chine matavi chinowanikwa pasi pevhu. Inoshanda kudyisa chirimwa nezvinovaka kubva muvhu. Ndiwo nhengo yekutanga inokura zvirimwa pazvinomera. Zvinogona kutaurwa kuti midzi ndiyo inonyanya kukosha yechirimwa. Kune marudzi akasiyana emidzi uye anogona kuiswa zvakasiyana zvichienderana neanchor iyo chirimwa chinopa, chimiro uye kutungamira kwekukura.
Midzi ine basa rakakosha muchirimwa. Ngationei kuti mabasa makuru emidzi ndeapi:
Sezvatakataura, rimwe remabasa makuru emidzi ndiko kutora mvura nezvinovaka muviri kuburikidza netubvudzi tudiki tunosveta twavanarwo, kuti vazopfuudza chikafu kuburikidza nedzinde kune chasara chirimwa.
Rimwe basa ravanozadzisa ndiko kumisa chimiro chechirimwa chese pakati, zvingave nemidzi yakadzika yepasi pevhu, kana nemidzi yemuchadenga yakasungirirwa kune zvimwe zvirimwa kana nzvimbo.
Mimwe midzi ine kukwanisa kuita photosynthesize kana kuti dzinonamatira kune mimwe miti kuti dzitore zvokudya zvadzo.
Mashizha ndechimwe chezvikamu zvinonyanya kuzivikanwa zvechirimwa chero chipi zvacho, chiripo mune zvinenge zvese zvinomera pasinei nemhando dzakasiyana-siyana dzemaumbirwo, hukuru uye kunyange mavara, uyezve, mashizha emiti ane mabasa anokosha akadai se photosynthesis nezvimwewo.
Inhengo dzezvirimwa, kazhinji dzakatetepa uye dzakasvibira muruvara, dzinokura kubva panhungirwa kana madzinde ezvirimwa. Vanogona kugoverwa nenzira dzakawanda dzakasiyana: maererano petioles, margins, mbabvu uye kunyange chimiro. Nekune rimwe divi, kurongeka kwayo kwakanyanya kunoenderana nekuti chirimwa chinochengeta mashizha ayo gore rose uye anogara asingagumi, kana kuti akarasikirwa nawo mumwedzi inotonhora uye anodonha.
Mashizha anonyanya kuzadzisa mabasa matatu:
Dzinoita photosynthesize kuwana simba remakemikari kubva mumwaranzi yezuva.
Vanobvumira zvirimwa kufema uye kuchinjana magasi pakati pehusiku.
Vanodikitira, vachibvumira mvura yakawandisa kuti iyerere nemavari.
Munyaya yemiti yakawanda, ruva ndiro rinonyanya kukwezva vanhu, uye ndiro rinokonzera kubereka kwechirimwa. Maruva anowanzo kuve nemavara akajeka nekuda kwechikonzero ichi: kukwezva zvipembenene zvinotakura mukume. Asi zvakadaro, zvinomera zvose zvinoberekana kuburikidza nemaruva.
Kune marudzi akawanda emaruva anosiyana pakukura, ruvara, maumbirwo, uye kunhuwirira. Maruva ane calyx, corolla, stamens, filaments, uye pistils. Poleni inowanikwa mu stamens (nhengo dzechirume dzemiti yemiti), uye maitiro ekugadzira zvirimwa zvitsva anoitika apo mukume unotakurwa kuenda kumapistils enhengo dzechikadzi.
Hazvisi zvinomera zvose zvinobereka zvibereko, asi izvo zvinobereka zvepabonde nembeu zvinowanzova nezvibereko. Kana ruva rikaiswa fetiraiza, rinobereka mhodzi dzinoumba michero yakaripoteredza. Sezvakaita mashizha nemaruva, kune marudzi akawanda emichero kana miriwo. Chero muchero waunowanzo dya muchero wechirimwa kana muti, asi ndozvakaitawo zvibereko zvatinodya senzungu.
Basa remuchero rinowanzochengetedza mbeu paunenge uchifambisa kupararira kwayo kuburikidza nekuita kwemhuka, iyo inodya michero uye inoisa mbeu kune imwe nzvimbo, zvichiita kuti kubereka kwemarudzi.
Mbeu yakakosha kune zvirimwa kubvira navo vanogona kupfuudzira magene avo. Kune mhando dzakawanda: mapapiro, madiki pane musoro wepini, saizi yetenisi bhora ... Kuti imere, zvakakosha kuti mamiriro acho ave akakodzera kune yega yega mhando. Nekudaro, kana semuenzaniso zvichibva kunzvimbo yekugara uko chando chiri kutonhora zvakanyanya, kuitira kuti ivo vamere, zvichave zvakakodzera kuti tembiricha ive yakaderera.
Ndinovimba kuti neruzivo urwu unogona kudzidza zvakawanda nezvezvikamu zvechirimwa zvine maitiro ayo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Green Renewables » Environment » Zvikamu zvemuti
Nzira yekudzivirira sei kuchinja kwemamiriro ekunze